Warshadda Hilibka la qaboojiyey - Shiinaha Soosaarayaasha Hilibka la qaboojiyey, Alaab-qeybiyeyaasha
Cuntada la qaboojiyey waxay u qaybsan tahay cuntada la qaboojiyey iyo cuntada la qaboojiyey. Cuntada barafaysan way fududahay in la xafido waxaana si aad ah loogu isticmaalaa soo saarista, daabulida iyo keydinta cunnooyinka xumaada sida hilibka, digaaga, wax soo saarka biyaha, caanaha, ukunta, khudaarta iyo miraha; waa nafaqo, ku habboon, nadaafad iyo dhaqaale; Baahida suuqa waa mid weyn, waxay ku fadhidaa boos muhiim ah wadamada horumaray, waxayna si xawli leh ugu horumaraysaa wadamada soo koraya. Cunto la qaboojiyey: uma baahna in la qaboojiyo, waa ...
Hordhaca wax soo saarka Alaabta ceeriin waxay ka yimaadaan kawaanada xoolaha iyo shirkadaha diiwaangalinta dhoofinta ee Shiinaha. Alaabta ceyriinka ah ee laga soo dhoofiyo inta badan Faransiiska, Isbaanishka, Nederland qeexitaan iyo laadhuus, xira astaamo xarig ah Saamiga dufanka ilaa khafiifka ah waa 3: 7, dufan laakiin ma ahan mid dufan. Codso kanaal Ku habboon habeynta cuntada, silsiladda makhaayadaha iyo warshadaha kale. Xaaladaha keydinta Cryopreservation ee ka hooseeya -18 ℃ Habka Qaboojinta oo Kooban Hannaanka qaboojinta filimka, CPF ayaa la kulmay ...
Hordhaca wax soo saarka Alaabta ceeriin waxay ka yimaadaan kawaanada xoolaha iyo shirkadaha diiwaangalinta dhoofinta ee Shiinaha. Alaabta ceyriinka ah ee la soo dhoofiyo badanaa waxay ka yimaadaan Faransiiska, Isbaanishka, Nederland, iwm qeexitaan dheeri ah, aqbal sifooyinka caadada Qiyaasta dufanka iyo khafiifka waa 3: 7, dufan laakiin ma ahan mid dufan. Codso kanaal Ku habboon habeynta cuntada, silsiladda makhaayadaha iyo warshadaha kale. Xaaladaha keydinta Cryopreservation ka hooseeya -18 technology Tikniyoolajiyadda borotiinka-barafowga Biological barafowga baraf t ...